विदेशमा रहेका नेपालीले ई– पासपोर्टका लागि आवेदन दिने तरिका हेर्नुहोस ! - jagritikhabar.com
विदेशमा रहेका नेपालीले ई– पासपोर्टका लागि आवेदन दिने तरिका हेर्नुहोस !
विदेशमा रहेका नेपालीले विद्युतीय राहदानी(ई–पासपोर्ट) लागि निवेदन दिन अझैँ दुई महिना कुर्न पर्ने भएको छ । अहिले काठमाण्डौमा रहेको राहदानी विभागबाट जारी भइरहेको ई–पासपोर्टको लागि विदेशमा रहेका नेपालीले नेपाली नियोगबाट झण्डै दुई महिनापछि मात्र निवेदन दिन सक्ने राहदानी विभागले जनाएको छ । ३४ पृष्ठको विद्युतीय साधारण राहदानीको लागि अहिले राहदानी विभागमा मात्र निवेदन दिन सकिन्छ । केही हप्तापछि क्रमिक रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट तथा तोकिएको इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट निवेदन दिन सकिन्छ ।
१६ वर्ष माथिका र नेपालमा निवेदन दिनेहरूको हकमा विद्युतीय राहदानी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हो । तर विदेशबाट निवेदन दिने र १६ वर्षभन्दा कम उमेरका आवेदकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि निवेदन दिन सकिन्छ । कार्ड बनेर आउन केही समय लागे पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर तुरुन्त पाउन सकिन्छ । नम्बरका आधारमा राहदानी बनाउन सकिने विभागले जनाएको छ ।
विद्युतीय राहदानीमा विद्युतीय चिप र एन्टेनासमेत जडान गरिएको हुन्छ । तर यो आँखाले सहजै देख्न सकिदैन । चिपमा औठाछाप, तस्बिर लगायतका व्यक्तिगत विवरणहरू पनि हुन्छन् । यी विवरणहरू राखेर चिप लक गरिसकेपछि कसैले थपघट वा फेरबदल गर्न सक्दैनन् । ICAO PKD मार्फत सूचनाहरू रुजु हुने हुँदा विभिन्न देशका अध्यागमन कार्यालयहरूमा सहज र छिटो हुनेछ । विद्युतीय गेटहरू भएका ठाउँमा स्वतः खुल्ने व्यवस्था समेत गरिएको हुन्छ । विभागका अनुसार यो तेस्रो पुस्ताको अत्यन्त सुरक्षित र भरपर्दो राहदानी हो । साधारण राहदानीको रङ्ग चकलेटी खैरो हुन्छ । साधारण राहदानी ३४ पेज र ६६ पेज गरी दुई प्रकारका जारी हुन्छ ।